Umatshini olukiweyo we China - China Umakhi welaphu, abaxhasi
Yindlela elungileyo yokuphucula iimveliso zethu kunye nezisombululo kunye nokulungiswa. Injongo yethu iya kuba kukwakha izisombululo kubathengi abanamava amahle kwiLaphu eliLukiweyo,,,, Sinolwazi lweemveliso zobungcali kunye namava atyebileyo kwimveliso. Ngokuqhelekileyo siyicinga impumelelo yakho lishishini lethu! Ngenxa yenkxaso elungileyo, iintlobo ezahlukeneyo zorhwebo ezikumgangatho ophezulu, iindleko ezinobundlobongela kunye nokuhanjiswa okusebenzayo, siyalithanda igama elihle phakathi kwabaxumi bethu. Siyinkampani enamandla kunye nemarike ebanzi yelaphu elilukiweyo, Yintoni intengo elungileyo? Sinikezela abathengi ngexabiso lefektri. Kwinqanaba lomgangatho olungileyo, ukusebenza ngokukuko kufuneka kuthathelwe ingqalelo kwaye kugcinwe inzuzo esezantsi nesempilweni. Yintoni ukuhanjiswa okukhawulezayo? Senza ukuhanjiswa ngokweemfuno zabathengi. Nangona ixesha lokuhambisa lixhomekeke kubungakanani beodolo kunye nobunzima bayo, sisazama ukubonelela ngeemveliso ngexesha. Sinethemba lokuba sinokuba nobudlelwane beshishini ixesha elide.